Kacdoonka Oromada oo gaaray Diridhaba + wayaanah oo ciidankii ugu Badnaa kusii daabulaya Magaalada | Voice Of Somalia
Kacdoonka Oromada oo gaaray Diridhaba + wayaanah oo ciidankii ugu Badnaa kusii daabulaya Magaalada
Posted on December 14, 2015 by Voice Of Somalia Image
Wararka naga soo gaaray magaalada Diradhaba oo kamid ah magaalooyin waawayn ee sitaraatijiga u ah dowlada Itoobiya ayaa sheegaya in magaaladaasi gaadheen Kacdoonkii ay wadeen ardayda Oramada waxaana laga soo sheegaya halkaasi Dibad baxyo bilow ah oo ay dhigayaan shacabka magaalada Si nabad ah.
Dibadbaxyadaasi ayaa lagu taageryaa shacabka Oromada ee gumaadka iyo Cabudhinta lagu hayo iyadoo saraakhisa wayaanha ay durba bilaaben inay ciidmao aad u badan oo hubaysan ku daabulaan magaalada si aysan gacanta uga bixin isla markaana loo xakameeyo mudaharaadayaasha.
Waxaa laga dareemaya magaalada Diradhaba saaka Culayska jira waxaana laga cabsi qabaa inay ka dhacdo waxii shalay ka dhaca deegano hoos yimaad Shawa .
Dadka ku nool magaalada oo u badan Oromada ayaa muujinaya sida ay uga xunyihiin Xasuuqa loo gaystya Ardayda oromada ee sida nabada ah u mudaharaadayay .
Dhanka kale waxaa guud ahaanba la jaray Isgaarsiinta noocyadeeda kala duwan Kilil ka Oromia si looga qariyo caalamka xasuuq lagu hayo dadka oromada ah waxaana durba gaadhay Mgaalooyinka wawayn ee Oromia saraakiil ka socda ciidanka wayaaha .
ISLA WEYNIDII IYO HANKII SOOMAALIDA HORE IYO HURAALAYAASHA MAANTA.
Dhageyso:Kacdoonkii Oromada oo laba kacleeyay.